Mhepo jenareta-QIANGSHENG MAGNETS CO., LTD
AFPMG yeDiki Mhepo Turbines & Hydro Simba
Isu tinogadzira nhevedzano yesimba nyowani yakasimba-inoshanda, yakaumbika-dhisiki, yemukati (yekunze) rotor, matatu-chikamu, Axial Flux Permanent Magnet jenareta (AFPMG) ine isina kusimba (isina iron) stator. neakananga-tyaira diki mhepo turbine (SWT) uye Hydro Simba vagadziri. AFPMG inopa zvakanakira maererano nehukuru uye chitarisiko. Iyo nical chimiro cheAFPMG yakapusa, uye iyo inotenderera pfungwa ine stator mamiriro inopa iyo jenareta kuita kwakanaka uye kwakanyanya kushanda.
High kunyatsoshanda panguva yakaderera kumhanya
No zvokuimba nemotokari kurasikirwa, hapana rotor mhangura kurasikirwa nokuda zvachose magineti excitation uye hapana stator eddy kurasikirwa zvazvino mu ironless (coreless) stator
Iko kushanda kweAFPMG, zvinoenderana nemuenzaniso, kuri kusvika ku90%.
Chikamu chidiki uye huremu
AFPMG yakasarudzika isingaremi uye compact, kuvaka kuri nyore. Iwo majenareta anoshandisa mashoma simbi mukuvaka kwavo, nepo achigwinya zvakanyanya uye aine hupenyu hwakareba.
Huremu hudiki uye jenareta jenareta zvinoita kuti zvikwanise kudzora saizi nemutengo wemhepo turbine dzese.
Iyo yakakwira yakatarwa kugona (kuburitsa kugona pauniti huremu) inonyanyisa kukunda avo vanobva kukwikwidza vagadziri. Izvi zvinoreva kuti nematanho akaenzana uye huremu.
Zvidiki kwazvo zvekugadzirisa mutengo
AFPMG yakanangana nemotokari, hapana gearbox, isina-mafuta system, yakaderera tembiricha inomuka
Iko kushanda kwesimba kwakanyanya pakumhanya kwakadzika muindasitiri zvinoreva kuti majenareta anokwanisa kutsigira chero mhando yemhepo turbine ine yakatambanuka renji yemhepo inomhanya.
Iko kushandiswa kwemhepo-kutonhora kunoderedza mari yekuchengetedza uye zvakare zvakanyanya kusimbisa kuzvitonga kwemasimba emagetsi.
Yakadzika kwazvo kutanga torque
AFPMG haina cogging torque uye torque ripple, saka torque yekutanga yakadzika kwazvo, kune yakananga-kutyaira diki mhepo turbine (SWT), iyo yekutanga mhepo kumhanya ishoma 1m / s.
Ruzha rwakadzika kwazvo, kushomeka kushoma, hapana bhandi remagetsi, giya kana lubrication unit, hupenyu hwakareba
Iyo 100% tekinoroji yakachena zvakatipoteredza uye zvinhu zvinoshandiswa mukugadzira mukati mehupenyu hwayo hurefu hwebasa uye ramangwana rekudzokorora harina kukuvadza kune zvakatipoteredza.
· Main Mafomu
Magetsi emagetsi madiki (SWT)
Magetsi emagetsi madiki anotyairwa nepeturu kana mainjini edhiziri,
Magetsi emagetsi anotyaira michina, seinjini uye jenareta.
· Simba reHydro
Kushanda kweAFPMG kunopa imwe mhinduro munzvimbo yemagetsi emagetsi kana michina yemagetsi zvachose. Kuvaka kwavo kwakaumbwa-nedhisiki uye kunobatsira electromechanical hunhu hunomiririra iwo makuru maficha mune kumwe kugadzirwa kwesimba remagetsi uye mune akakwirira anoshanda emagetsi dhiraidhi masystem.
Uchishandisa Range pamusoro Permanent Magnet jenareta (PMG)
Kuvaka uye kwehunyanzvi mashandiro anoita Permanent Magnet Generator (PMG) sarudzo yakasarudzika yezvishoma zvemhepo turbine (SWT) kunyorera.
Inoshanda nzvimbo ye PMG inovhara izvo zvinodikanwa zvemudiki mhepo turbine (SWT). Kwe 1-5KW mhepo turbines, inogona kushandisa imwechete rotor-imwechete stator ye AFPMG, ye5KW-50KW turbines, inogona kushandisa AFPMG nekuvakwa kweiyo imwechete rotor-mbiri stators.
Iko simba remagetsi pamusoro pe50KW rakafukidzwa neRadial Flux Permanent magnet jenareta (RFPMG).
QM-AFPMG Inner Rotor QM-AFPMG kunze Rotor
mhando Rated Output simba (KW) Rated havukavu (RPM) Rated Output voltage uremu (KG) mhando Rated Output simba (KW) Rated havukavu (RPM) Rated Output voltage uremu (KG)
1. Dhiimendi uye kushivirira
2. Kuburitsa simba, voltage uye RPM
3. Insulation kuramba bvunzo
4. Kutanga torque
5. Waya yekuburitsa (Tsvuku, chena, nhema, girini / ivhu)
1. Kushanda mamiriro: pasi pehupamhi hwe 2,500 metres, -30 ° C kusvika +50 ° C
2. Usati waiswa, zvinyoro-nyoro kutenderedza shaft kana dzimba kuti ubvumidze kutenderera kuchinjika, pasina ruzha rwusina kujairika.
3. AFPMG yakabuda-nhatu-nhanho, nhatu-waya kuburitsa, usati waiswa, shandisa 500MΩ Megger ku
tarisa kuputira kusagadzikana pakati peiyo tambo waya uye kesi, haifanire kunge iri pasi pe5 MΩ
4. Kana AFPMG iri yemukati rotor jenareta, mune yekumisikidza maitiro, inofanirwa kuve nechokwadi chekuti yekukiya sikuru munzvimbo, zvakakosha
Garandi: makore 2-5